Hitsy toraka: Nihen-danja | NewsMada
Par Taratra sur 21/10/2019
Manomboka miverina amin’ny toetra nahalalana azy indray ny baolina kitra malagasy. Ilay resy lava sy miady an-trano. Mihakivy ireo mpijery baolina, na tsy mbola tena miseho mivantana aza, izany. Be no feno ahiahy ny amin’ny hoavin’ity taranja ankamamian’ny Malagasy ity. Mankahery tena sisa, taorian’ny faharesen’ny Barea de Madagascar, niatrika ny fifanintsanana ny “Chan 2020”. Tsy ahita ny Barea de Madagascar, hilalao any Kameronina, indray izany, amin’ity.
Nihen-danja tanteraka satria takona tanteraka ilay zava-bitan’ny Barea de Madagascar, tany amin’ny “Can 2019”, tany Egypta. Mahavaka ny saina ihany koa ity ady manara, eo amin’ny mpitantana ity. Miseho mifankatia sy mifanampy rehefa eo imason’olona fa mifamely kibay, raha vao tsy tazan’ny maso.
Efa miomankomana avokoa ireo firenena rehetra, hanao ny fifanintsanana ho an’ny “Can 2021”. Ny Barea de Madagascar, tsy mbola taitra amin’izany satria ekipa mahavita majia. Tsy taitra, tsy rototra ary tsy mailo, na ny mpanazatra na ny mpitantana na ireo mpilalao. Mihen-danja ny fanomanana, tsy toy ny tamin’ny taon-dasa.